तस्बिर : बिजु महर्जन - कान्तिपुर समाचार
तस्बिर : बिजु महर्जनका लेखहरु :
मधेसको छातीलाई आफ्नो भूमि मानी बसेको डोम बस्तीहरुमा बजार छिर्‍यो । बजारभन्दा अघि राजनीति प्रवेश गर्‍यो, प्रशासन आयो, न्याय, शिक्षा र सुरक्षा प्रणाली लागू भयो । गाउँका महाजनहरु मालिक भए भने डोमहरु भूमिहीन, अधिकारहीन र आवाजविहीन भए । डोमहरुको आवास, बस्ती र आवाज रहेन ।
महिलाका हातमा स्टेयरिङ
राजधानीमा कुनै समय गाडीको चालक भन्नेबित्तिकै पुरूष बुझिन्थ्यो । महिलाले इच्छा जाहेर गर्दासमेत हौसला दिनुको सट्टा निरूत्साहित गर्ने रवैया समाजमा थियो । महिलाले त्यसमाथि विजय पाए । सवारी चलाउने काममा बढेको सहभागिताले महिला केहीमा कम छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।
खोकनामा सिकाली जात्राको रमझम [तस्बिरहरु]
ललितपुरका खोकनाका स्थानीय बासिन्दाहरु इन्द्रायणी पर्वमा सहभागी भएका छन् । यो सिकाली जात्रा नामले प्रसिद्ध रहेको छ । स्थानीयहरुले दसैंको साटो यो पर्व मनाउने गरेका छन् । घटस्थापनाको दिन सुरु भएर फूलपातीको दिन पाँच दिन यो जात्रा सञ्चालन हुने गरेको छ । पर्वको अवसरमा स्थानीय बासिन्दाले कुल देवता पूजा गर्ने गर्दछन् ।
भक्तपुरको याछेँ ६ स्थित ७५ वर्षीय पूर्ण चित्रकार नवदुर्गा देवगणको मुकुण्डो तयार पारिरहेका छन् । जीवित देवताको रुपमा पुजिने भैरव, महाकाली, बाराही, कुमारी, गणेश, ब्रह्मायणी, महेश्वरी, वैष्णवी, बालकुमारी, श्वेतभैरव, सिंह र दुम्ह गरी १३ देवीदेवताका मुकुण्डो उनले बनाउँदै आएका छन् । हरेक वर्ष घण्टाकर्णको दिनदेखि मुकुण्डो बनाउन सुरु गर्छन् र दसैंको नवमीमा सक्छन् । एउटा मुकुण्डोको तौल पाँच किलोदेखि ६ किलोसम्म हुन्छ ।
आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर्न माग
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गर्न माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको सन्दर्भमा समाजले आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन र निर्माण, भण्डारण आदिलाई निषेध गर्ने आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई अनुमोदन गर्न माग गरेको हो ।
इन्द्रजात्राको लिंगो (य:सिं) मंगलबार वसन्तपुर पुर्‍याइएको छ । इन्द्रजात्रालाई स्वागत गर्दै जात्रालुहरूले परम्परागत विधिअनुसार भोटाहिटीबाट लिंगो वसन्तपुर लगेका हुन् । लिंगो स्थापना गरिएसँगै इन्द्रजात्रा सुरु भएको मानिन्छ । उक्त लिंगो आगामी असोज २ गते हनुमानढोकामा ठड्याइनेछ ।
'हरेक बबाल कुरा'बाट मञ्चमा फर्कँदै कथाघेरा
'म तल गएँ, भान्सामा । चिकेन स्यान्डवीच बनाएर खाएँ । चिकेन स्यान्डवीच तर, चिकेनबिनाको । टिभीको अगाडि गएर बसें, अनि 'लिस्ट' कन्टिन्यु गर्न थालें । अनि मलाई के लाग्यो, त्यतिखेर लिस्ट मैले कुनै प्राथमिकताको आधारमा लेख्नुहुँदैन । किनभने हामीले कसरी थाहा पाउने मोमोभन्दा मुमिन बेटर हो'? छेउका मानिसहरुलाई प्रश्न गर्दै उनी लिस्ट बनाउन थाले ।
एमसीसी खारेजीको माग राख्दै विरोध प्रदर्शन [तस्बिरहरू]
नेकपा माले, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका विभिन्न वाम दलले एमसीसी खारेजीको माग राख्दै विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । 'एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु भनेको नवऔपनिवेशीकरण स्वीकार गर्नु हो', 'एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्दा देशमा अस्थिरता र द्वन्द्वमा फस्ने' लगायत विभिन्न नारा लगाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
त्रिचन्द्रमा विद्यार्थीको प्रदर्शन : 'डियर पीएम तपाईं पढेको कलेजको पुनर्निर्माण कहिले ?'
जीर्ण अवस्थामा पुगेको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीले आइतबार प्रदर्शन गरेका छन् । यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको माग गर्दै नेविसंघको नेतृत्वमा क्याम्पस परिसरमा प्रदर्शन गरिएको हो । सहभागीले 'डियर पीएम तपाईं पढेको कलेजको पुनर्निर्माण कहिले ?', 'धरहरा बन्यो त्रिचन्द्र कहिले ?', 'धरहरा प्राथमिकतामा पर्छ शैक्षिक क्षेत्र किन पर्दैन' जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । त्रिचन्द्र क्याम्पसमात्रै नभई देशको सम्पदा र इतिहास भएकोले यसको संरक्षण गर्न भन्दै विद्यार्थीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन [तस्बिरहरु]
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरुले मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीले रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । सोमबार निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढाएको थियो । यस्तै, खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको थियो ।